Wax Ka Baro Kalluunka Qasacadaha Ku Jira Iyo Qaabka Loo Sameeyo… | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Wax Ka Baro Kalluunka Qasacadaha Ku Jira Iyo Qaabka Loo Sameeyo…
Published: December 28, 2016, 7:50 pm
(0) Comments Waxaanu halkan idinkula wadaagi doonaa saddex qaybood oo muhiim ah kuwaas oo kala ah:
1- Kalluunka qasacadaha ku jiro iyo qaabka loo sameeyo?
2- Halis miyuu ku yahay caafimaadka, maxaana loo yidhaahdaa kansar ayuu keenaa?
3- Faa’iidada saliidda kalluunka iyo meelaha laga helo?
Kalluunka ugu badan ee qasacada lagu keeno waa nooca loo yaqaano “Tuna fish”, waa kalluun ay dood badani ka taagan tahay, laguna sameeyay cilmi-baadhisyo kala duwan, marka ugu horeyso aan idiin sharaxo qaabka loo sameeyo:
1- Marka kalluunka la soo dabto, madaxa iyo saynta ayaa laga gooyaa, uurkujirtane waa laga saaraa.
3- Marka la qaboojiyo ka dib, lafaha yaryar iyo qolfaha ayaa laga saaraa, waana la kariyaa.
4- Kadib isagoo la kariyay oo qalalan ayaa lagu guraa qasacadaha.
5- Waxaa lagu dul shubaa dheecaan biyo ah oo cusbo leh ama saliidda cuntada lagu karsado sida caddayda oo kale (Ogow biyaha ku jira gasacada kalluunka maaha maraqiisa ama saliid kalluun, waa biyo milix leh ama saliid qudaar “Vegetable Oil”).
6- Kadib qasacada waxa laga nuugaa hawada, waana la soo daboolaa.
Markaa waa muhiim in aad ogaatid dheecaanka ku jira qasacada kalluunku inaanu ahayn saliida kalluunka, mana aha dheecaankiisa ee waa biyo ama saliid qudaar oo lagu daray inta aan la soo sajjalin.
Kalluunka qasacadaysan Iyo Caafimaadka:
Kalluunka nooca Tuna-da wuxuu xambaarsan yahay nafaqo badan, waxaa laga helaa birta, saliida omega-3, fitamiino kala duwan iyo borotiin badan, laakiin dhakhaatiirtu kuma taliso kalluunka qasacadaysan in la badsado khaasatan hooyada uurka leh, hooyada nuujiso iyo ilmaha yar sababtuna waxay tahay:
Ka Cabsashada Sunta Mercury-ga: Qasacadaha kalluunka Tunada lagu keeno waxaa badanaa lagu arkaa maadada loo yaqaano “methylmercury”, taasoo sun ku ah neerfayaasha bani’aadamka, inkastoo suntaasi jidhku iska saari karo laakiin haddii jidhka ay ku badato dhibaato ayay u gaysan kartaa, waxaana lagu gartaa kabuubyo joogto ah, gariir ama jarayn gacmaha ah, socodka oo dhib noqdo, aragga oo daciifa, xasuusta oo yaraato, sidaas awgeed ayaa loo yidhaahdaa yaan la badsan, hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinaysa way u gudbin kartaa dhallaankeeda, dhibaatana wuu ka qaadi karaa. taladu waxay tahay haddii aad heli kartid kalluun fresh ah oo aad kaga kaaftoomi kartid ku bedelo, haddii kalana iska yaree isticmaalka joogtada ee kalluunka qasacadaysan.
Arrinta ku saabsan in kansar laga qaado maaha arrin la xaqiijiyay ama la hubo, laakiin dhibaatooyinkan kale ee aynu kor ku soo xusnay waxay dhakhaatiirtu ugu kala qaybsameen 3 kooxood:
Kooxda 1-aad waxay ku talisaa in kalluunka qasacadaysan la cuni karo, maadaama ku sumoobidda mercury-ga aanay badanaa dhicin, laakiin in aan la badsan si suntaasi aanay jidhka ugu badan, dhibkeedane looga badbaado.
Kooxda 2-aad waxay ku taliyaan in raggu ay cuni karaan, laakiin haweenku ay ka fogaadaan sababtoo ah hadday uur qaado ama ilmo nuujiso way u gudbin kartaa uurjiifkeeda ama dhallaanka, halistana dhakhso ayay ku saamayn kartaa.
Kooxda 3-aad waxay ku taliyaan in kalluunka qasacadaysan oo idilba laga fogaado maadaama faa’iidada laga helayo ay khasaaro la socon karto, laguna kaaftoomo kalluunka dabiiciga ah.
Maadaama aanu waddankeenu lahayn hay’ado u xilsaaran kontoroolidda badeecadaha dalka soo gala ama hay’ad caafimaad oo baadha tayada cunnada la inoo keeno waxaynu ku talinaynaa in kalluunkan qasacadaysan cunistiisa aan la joogtayn, hooyada uurka leh iyo hooyada nuujisaana ay ka taxaddaraan.
Saliidda caafimaadka xambaarsan waxaa laga helaa kalluunka hilibkiisa ee maaha saliidda lagu kariyo ama midda qasacadaha ku jirta, Saliidani waxay xambaarsan tahay faa’iidooyin ka hortag iyo mid daaweyn, waxayna wax u tartaa wadnaha, xididada dhiigga, qanjidhada, maskaxda, murqaha iyo lafaha iyo hooyada uurka leh.
Saliidan waxa laga helaa kalluunka badankiisa, laakiin wuxuu aad ugu badan yahay kuwa loo kala yaqaano salmon, herring, mackerel, anchovies iyo sardines.
Saliidan cilmi-baadhisyo badan ayaa lagu sameeyay, cudurro badana waxbay u tartay, dadka ku nool meelaha aan laga helin kalluunka dabiiciga ah waxay saliidan ka heli karaan farmasiiyada iyadoo kiniin ahaan u samaysan.
« Warbixinta Ka HoreysayWhy do I keep attracting the same kind of man?	Warbixinta Xigto »Why Physiotherapy Can Help Women’s Health	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply